Xalka - Testeck Co., Ltd.
Sagaal shirkadood oo ku yaal Guangzhou ayaa qorsheynaya inay si wadajir ah u maal gashadaan RMB 5 bilyan si loo dhiso Guangzhou Greater Bay Area Rail Transit Industry Investment Group Co., Ltd.
Awood cusub oo caalami ah oo koronto lagu rakibay ayaa haleeshay meel sare
Wakaaladda Caalamiga ee Tamarta Cusboonaysiinta (IRENA) ayaa dhowaan soo saartay warbixinta tirakoobka la cusboonaysiin karo ee tirakoobka 2021, taasoo muujineysa in 260GW oo ah awoodda tamarta dib loo cusboonaysiin karo, oo ah rikoor cusub, lagu daray adduunka oo dhan sanadka 2020, taasoo boqolkiiba 50 ka badan sanadkii ka horreeyay.
Fiilooyinka iyo fiilooyinka gaarka ah waa alaabooyin taxane ah oo leh astaamo u gaar ah iyo qaabab gaar ah, kuwaas oo u dhigma fiilooyin caadi ah iyo fiilooyin tiro badan iyo baaxad ballaaran.
Transducer heerkulka waxaa loola jeedaa dareemayaal dareemi kara heerkulka una rogi kara calaamadda soosaarka la isticmaali karo Dareeraha heerkulka ayaa ah qaybta ugu muhiimsan ee qalabka cabbirka heerkulka, waxaana jira noocyo badan.
Qalabka aaladda otomaatiga ah wuxuu ku siin karaa dammaanad-qaad muhiim ah nabadgelyada wax-soo-saarka warshadaha, sidoo kale wuxuu dhiirrigeliyaa wax-soo-saar hufan oo xasilloon. Maanta waxyaabaha muhiimka u ah khaladka qalabka caadiga ah ayaa la soo bandhigi doonaa, taas oo waxtar kuu yeelan karta!
Habka Fiilooyinka ee Xakamaynta Heerkulka
Habka Fiilooyinka ee Xakamaynta Heerkulka - Jaantuska Fiilooyinka ee Xakamaynta Heerkulka Xarkaha xakamaynta heerkulku waa wax aan ka badnayn isku xidhka labada qaybood ee ugu muhiimsan, yacni gelinta iyo soo-saarka. Awoodda korontadu si caadi ah ayey u shaqeyn kartaa ka dib marka fiilooyinku isku xirmaan. Xakameeyayaasha heerkulka sare iyo kuwa adag waxay leeyihiin shaqooyin badan, inta badanna waxay siiyaan calaamado mitirrada labaad iyo duubayaasha, ama signaalka beddelaadda dibadda. Fiilooyinka waa fududaan ka dib ogaanshaha shaqada mitirka.